Guri IIB ah - Deeganka Garasbaalay - MyProperty.so
Guri IIB ah – Deeganka Garasbaalay For Sale
Waa Guri ay ka dhisan yihiin #6_Qol, #Musqul iyo #Kushiin Bacweyne ah, kuna yaalo kaso horjeedka #Isbitaalka_Bidey ee #Deegaanka #Garasbaaley. Waa Guri leh #Document_Saxan. #Cabirkiisa waa 20x15M2. #Qiimahiisa waa &#x1f4b5; $30,000 israac ah
☎️ 0612 922 242 / 0612 922 241
Hello, I'm interested in [Guri IIB ah – Deeganka Garasbaalay]
Guri IIB ah – Deeganka Garasbaalay - Hargeisa, Somalia
Hello, I'm interested in[Guri IIB ah – Deeganka Garasbaalay]